Todobaadka kobcinta fahanka khataraha internetka oo si rasmiya loo furay. - Hargeele - Wararka Somali State
Todobaadka kobcinta fahanka khataraha internetka oo si rasmiya loo furay.
November 5, 2019 125
waxaa caasimada dalka ee Addis-ababa si rasmi ah, loo daah furay 7aadka ka hortaga khatarta amniga internetka (cyberka) oo ah mid heer qaran, waxaana halku dhig looga dhigay “aan diirada saaro Amniga internetka Cyber-ka ” waxaana soo agaasintay wakaalada Nabad sugida xogta shabakadaha heer qaran.
Haddaba, maareeyaha Guud ee wakaalada Nabad sugida xogta shabakadaha ( networkiga) JDFI Marwo Ifraax cali muuse oo xafladii furitaanka 7aadka kahortaga khatarta cyberka qaranka kahadashay-ayaa sheegtay inay ujeedada 7aadkan tahay sidii kor loogu qaadida fahanka ka hortaga khatarta ahaanka imternetka iyo sidii loo kobcin lahaa garaadka maskaxeed ee bulshada dalku uleedahay khatarta weerarada amaanka internetka
Marwo Ifraax sheegtay in sanadba sanadka kadambeeya ay sii kordhayaan weerarada iyo waxyeelaynta khataraha internetku waxayna bulshada waynta dalka ugu baaqday inay fiiro gaara siiyaan dhibaatooyinka ay khatarta ay u gaysankarto amniga aaladaha casriga ah ee Teknoolajiga dalka.
Sidookale, wasiiru dawlaha wasaarada nabada JDFI Mudane zeynu jemal ayaa dhankiisa sheegay in xuska 7aadka kahortaga khatarta cyberka qaranku kusoo beegmay xili ay weerarada iyo waxyeelaynta internetku taagan tahay, kuna haboon in laga diyaar garoobo.
Mudane Zeynu Jemal ayaa Tilmaamay in wakhti xaadirkan uuna tartanka dunidu ahayn hubka, ciidamada, waxsoosaar iyo lacag midkoodna ee uu yahay aalada dunidan casriga ah ee qarniga 21aad ugu awooda badan, islamarkaana loo baahan yahay in kor loosoo qaado cududa waxbaratay ee sectarka technology-ga lana kobciyo garaadka maskaxeed ee dhalinyartu uleedahay khatarta internetka.
Dowladda Soomaaliya oo laba jibaartay howlaha gurmadka fatahaadaha iyo roobabka